Kpọ oku ngwa ngwa! Anyị ga-ewepụla usoro mgbasa ozi n'ọrụ ugbu a! : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 September 2019	• 4 Comments
De Telegraaf agbanweela aha ya maka isiokwu ndị akwụ ụgwọ site na '' extra '' to 'Premium'. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ akụkọ ahụ nke emepụtara onwe ya, ị ga-ebu ụzọ bụrụ onye otu akwụkwọ akụkọ ahụ nke derekwara maka ọdịmma onye biri na '40 /' 45. Anyị maara ugbu a na ANP dị n’aka ijeri ijeri John de Mol, anyị makwaara na ezinụlọ a nwere ike ịnwe onyonyo na-atọ ụtọ, n'ihi na ha nwere ike iwepụta ụdị ihe nkiri niile dị egwu ma ọ bụ ihe nkiri na-atọ ụtọ na onye na-ekiri ya na-enwe mmasị na ọnụ ọgụgụ ndị na-eme ka ọsịta. cannons. John de Mol aburula 'olu nke Holland' ya na ANP ma nwee mmetuta dị ukwuu banyere echiche gị banyere eziokwu.
Ọ bụ ya mere ugbu a bụ oge n'ezie maka mgbanwe buru ibu. Oge eruola ka iwepụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka ọdịmma. David Icke tinyere ya na ajụjụ ọnụ dị n'okpuru ebe ọ na-ekwu na ara abụrụla ihe ọhụrụ. Oge eruola ka anyị bulie ikwu eziokwu eziokwu ka ọ bụrụ ihe anyị na-eme, wepụkwa ụgha n’egwuregwu. Ogologo oge anyi anakwerela na mgbasa ozi mbu nwere ike iweputa akuko ojoo ma wepu ya. Ha na-agakwa n’ihu imebi ebe nrụọrụ weebụ akụkọ adịgboroja iji mee ka uche nke afọ akụkọ mgbasa akụkọ adịgboroja ha wee kwuo na akụkọ ụgha niile sitere na Russia.
Ọ bụ ya mere oge maka iji kwado weebụsaịtị a, karịa, iji kpachara anya wepu isi mgbasa ozi n'egwuregwu ahụ. Oge ọ bụla ịzụtara ma ọ bụ gụọ akwụkwọ akụkọ dị otú ahụ, ị ​​na-enye ya iwu. Anyị ga-eme nkwupụta doro anya site na ịhapụ mgbasa ozi. Na nzaghachi, kwado ọrụ m site na ịbụ onye otu ka m wee nwee ike ịga n'ihu na-ede banyere aghụghọ na aghụghọ anyị na-egwu. Ee, n'eziokwu ị nwere ike ịrụ ụka na anyị nwere onye dị ka David Icke, yabụ gịnị kpatara ị ga-eji kwado m? Echere m na, Otú ọ dị, David Icke bụ onye na-abịa site na mgbasa ozi ochie na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ochie, ma ọ dị mwute ikwu na enwere ike ịchịkwa mmegide ya. Gaghị enwe ike ide ọtụtụ ọgwụ na- oke abụba n'akwụkwọ, mee akwụkwọ edemede, ịga ọkara n'okirikiri ụwa ma kọọ kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ ọrụ nke 10 nwoke dị n'otu na mmadụ 1. A ga-enwerịrị enyemaka n’azụ nke ahụ, agbanyeghị ọfụma nke nwoke. Ekwere m na ngọngọ nke ugbu a nwere 95% eziokwu ewepụtara site na ndị isi n’ihu, mana ka ọ dị ugbu a zoro bọmbụ na okpukpu abụọ. A na - eme ka ọrụ ya mgbe ọ bụla ọ kwesịrị ịgbanye eziokwu.
In ihe m gara aga Egosirila m ọtụtụ ihe atụ nke usoro a iji mebie ezi ije. Mụ na David Icke, echere m na ọ bụ gbasara akụkọ akụkọ ahụ. Icke na-ekwu na ụzọ ọbara ọbara dị iche iche bụ nke nwere usoro ọzọ-dị ka nke ahụ nwere ike ịgbanwe ọdịdị. Akụkụ nke akụkọ ya bụ, n'uche nke m, jiri ụma gwakọta ndị ọzọ; ebe izu ike ahụ yiri ka ọ bụ eziokwu zuru oke.
Agbanyeghị na m kwenyesiri ike na anyị bi na ihe atụ ọ bụla, yabụ ị nwere ike inwe ụdị ihe ịtụnanya niile na - enweghị mmụọ agbụrụ ndị ọzọ ga-agba ụlọikwuu ebe a, n'uche nke m, aghụghọ. Nwee ya akụkụ a nke sabattianism a kpọtụrụ aha na ajụjụ ọnụ London Real, Icke nọ n'ụzọ ziri ezi ma enwere m mmetụta, mana m na-eche ịga ebe tere aka bụ ịkọwa otu ahụ n'okpuru ụdị ihe na-akpụ akpụ. Ọ masịrị m ịkpọ ìgwè ahụ avatar bloodlines nke ndị na-ewu simulation a na-akwali; ịbụ Lucifa (lee nkọwa).
Enwere ike ijikọ Icke na nke ahụ (nke dị n'elu) isiokwu ejikọtara akọwapụtara akara dị n'aka nri, site na ịnwe mmasị na Brexit ma ghara ịhụ site na egwuregwu dị n'azụ ya. Yabụ na agbanyeghị na ọ nọ n'akụkụ ụzọ ziri ezi n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi ihe niile, ana m atụ ụjọ na ọdịnihu adịghị anya, anyị ga-enweta nnukwu mkparị ebe, nke pụtara na aha ya na-apụ n'anya na mberede. Ka o sina dị, ọ bụ nnukwu onye nkwuchite ma jide n’aka na ọtụtụ mmadụ teta. Ya mere enwere m ezi obi na mmetụta nke a nke ịfụghari ezi ngagharị site na Icke agaghị eme, mana ọ bụrụ na ọ na-eme, mara ugbu a na ọ bụ akụkụ nke egwuregwu a nụchara anụcha. Ọ ga-n'ezie ịbụ ihe na-akụda mmụọ (mana obughi oge mbu).
Akpọghachila m oku ozugbo ka m bụrụ onye otu. A na-emegidekarị ọrụ m, dịka o doola anya taa mgbe weebụsaịtị kwụsịrị ịntanetị maka ọtụtụ awa. Ọ ka dị mkpa ịgbaso ma usoro mgbasa ozi ma usoro mgbasa ozi ọzọ na ịhụ nyocha nke akụkọ. Buru n'uche mgbe niile na ike a na-agbagharị ike nwere ike ịkọwapụta ma lelee otu esi eche, yabụ ọ ka dị mkpa ị attentiona ntị. Atụrụ m anya inwe ike itinye aka na nke a. Ọ bụ ya mere m ji arịọ gị ka ị bụrụ onye otu ma ọ bụ a onyinye otu oge ime. Achọrọ nkwado gị ngwa ngwa iji gaa n'ihu.
N'ihi iwu EU ọhụrụ, weebụsaịtị onyinye anaghị arụ ọrụ nke ọma. Inwere ike inye onyinye ozugbo site na: NL27 ABNA 0558 4469 22 n'aha Martin Vrijland Foundation
The General Dutch Press Agency (ANP) dị n'aka 1 mmadụ
Tags: ANP, Daivid, de, agba, Icke, Ajụjụ ọnụ, John, London, etiti, Mol, ozi ọma, ezigbo, kpamkpam, zuru
14 September 2019 na 15: 44
Agaghị m etinye àkwá m na nkata, ọ bụrụ na m nụ Icke n'ụzọ a, ana m anụ ozi sitere na ndị nchọpụta dị iche iche na-agafe n'enweghị aha na aha ha. Dika ọmụmaatụ Christopher Bollyn, Michael C. Ruppert, Bill Cooper, Michael Collins Piper, nyochachara.
Ana m adụ onye ọ bụla ọdụ ka ha mee nyocha nke ha ma bia na nkwubi okwu kama ịchụso pastọ.
Abụ Ọma: usoro ziri ezi dịka ụkpụrụ Hegelian bụ ibu ụzọ chee echiche banyere Ngwọta (ebumnuche) tupu ị rụọ nsogbu ahụ.
19 September 2019 na 20: 17
Icke kwesịrị ịbụ onye ihere, akụkụ ya na Cheney na egwuregwu egwuregwu bụ 1on1 depụtaghachiri n'aka ndị nyocha dịka Webster Tarpley na Michael C. Ruppert .. Akwụkwọ Crossing the Rubicon site na nke ikpeazụ jupụtara na ihe sitere na isi iyi. Ihe ọzọ mere iji gbochie anya ọnụọgụ ndị dịka Icke, ọkachasị n'ihi na ha anaghị ekwupụta etu ha si nweta ihe dị na ya, ekwughịkwa banyere ndị nyocha metụtara. Mmegide a na-achịkwa nke ga-ada n'oge kwesịrị ekwesị.
14 September 2019 na 19: 15
Ọ bụ ihe na-echegbu onwe ya na a na-ekerịta akụkọ a obere. Guo ya
Mgbe shit na-akụta onye ofufe, ee, ọ gafeela.
De Telegraaf nwere ndị ọbịa karịa saịtị a, saịtị a kwesịrị inwe okpukpu abụọ n'ihi na enweghị uru dị egwu na ike dị n'azụ ya.
De Telegraaf, "nnukwu anụ mmiri" nke abụọ W O.
Onye obula doro agha ahu agha dika “OZI” n’agha. lelee nke ahụ….
De Telegraaf bụ ihe ọjọọ na ezighi ezi, anyị enweghị ike ịme ka ọ maa mma
14 September 2019 na 19: 43
N'otu oge, agwara m otu nwoke okwu na ndekọ ego na Amsterdam nke zụtara Telegraaf. Agwara m: "know ma na ọ bụ mkpọsa na ụgha niile ka ị na-azụta ebe ahụ, ịmaghị ya?"
Ọ zaghachiri, sị: "Ee, amaara m nke ahụ, mana enwere m onwe m na kọfị ụtụtụ m na akwụkwọ akụkọ m."
Yabụ na igwe na-agbasa echiche na-enweta ọnụ ụzọ oge niile. Ọ na-arọ nrọ ahụ nke ọma (hypnosis) ọ na-agụkwa nke ọma ihe niile pulp n'akwụkwọ akụkọ. Onye Dutch chọrọ ka a kwaa ya emo, n'ihi na nke ahụ bụ ọdịnala.
" Ndi 911 bu oru ime? De Telegraaf nwere azịza nye ajụjụ gị niile!
Ihe nlere mbụ Disney Channel kwuru na ndị pedophiles Hollywood metọrọ ya »
Nleta nile: 13.112.133
2 igwefoto op Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii'
Jikọọ ndị 1.650 ndị ọzọ debanyere aha